के हो यौन विचलन ? [ किन बढ्दै छ यौन विचलन ? ] onlinedarpan.com
Tuesday 19th of October 2021 / 11:47:30 PM
यौन सबैको अनिवार्य आवश्यकता हो । स्वस्थ यौन व्यवहारमा संलग्न जोडीले आपसमा स्वीकृत विधि र व्यक्तिबाट यौन क्रियाकलापको आनन्द अनुभूत गर्छन् । यस्तो व्यवहारमा कुनै एक जनालाई आफूलाई यौन सम्पर्क गर्न दबाब दिएको अनुभूति हुनु हुँदैन त्यस्तै यौनसम्पर्कपछि पनि एकअर्काप्रति सम्मानको भाव रहनुपर्दछ । दुवैले यौनसम्पर्क अघि एकअर्काको शरीर र भावना बुझ्नुपर्छ । वास्तवमै यो नै स्वस्थ्य यौनसम्बन्ध हो ।
तर स्वस्थ यौन व्यवहार तथा स्वस्थ यौन मनस्थितिबिना एक जनाको मात्रै उत्तेजनामा कायम हुने कुनै पनि यौन क्रियाकलापलाई मेडिकल भाषमा यौन विचलन ’एबनर्मल’ भनिन्छ । यस्ता यौन विचलन भएमा एउटा किशोर महिलाका ब्रा र पेन्टी चोरेर यौनतृप्ति लिने, महिलाले लुगा फेरेको हेरेर यौन चरमोत्कर्षमा पुग्ने, दिनमा एउटा नीलो फिल्म हेरेन भने बौलाहा जस्तो हुने, सार्वजनिक यतायातमा महिलालाई स्पर्श गरेर यौन प्यास मेटाउने जस्ता क्रियाकलाप हुने गर्दछ ।
नेपाल जस्तो समाजमा यौन विचलन बढ्दोक्रममा छ । जसका कारण बलात्कार, यौन शोषण, यौन दुव्र्यवाहार र पीडाजनक यौन व्यवहारका रूपमा समाजमा प्रकट भैरहेका छन् ।
यस्ता यौन विचलनमा व्यक्तिको मनोविज्ञान, सामाज, सांस्कृति र दैनिक व्यावहार आदिले प्रभाव पारीरहेको हुन्छ । त्यसैले यो समस्या मानिसका यौन व्यवहारमा देखिने विचलन सबैभन्दा कठिन विषयमध्ये एउटा हो ।
विश्वविख्यात मनोचिकित्सक सिग्मन्ड फ्रायडले यौन विचलनको प्रमुख कारण इड, इगो र सुपर इगोबीचको असन्तुलनलाई मानेका छन् । फ्रायडका अनुसार हरेक मानिसको असीमित यौन चाहना हसने गर्दछ तर समाजमा स्वीकृत यौन व्यवहार सहज हुँदैन । जसबाट मानिसले यौन चाहाना आफैँभित्रबाट नियन्त्रण गर्दछ । यस्तो नियन्त्रणको असर अर्थात् यौन आकांक्षा र सीमाबीचको द्वन्द्वले जन्माउने डर, चिन्ता, लाज र हीनताबोधले मानिसलार्ई आफ्नै नजरमा गिराउँछ, जसको फलस्वरूप मानिस यौन विचलनको अवश्थामा पुग्दछ ।
कस्ता कस्ता हुन्छन् ?
१. भ्वायरिजम (दर्शनरति)
यस्तो समस्या भएकाहरूले लुकीलुकी अर्काको यौनक्रीडा हेरेर वा उनीहरूलाई हेरेर यौनतृप्ति प्राप्त गर्न खोज्छन् ।
२.स्याडिजम (परपीडन रति)
यस्तो समस्या भएकाहरुले यौन पार्टनरलाई पीडा नदिएसम्म यौन सन्तुष्ट प्राप्त भएको महशुस गर्र्दैनन् । यौन उत्तेजनामा आएका बेला आफ्नो यौन पार्टनरलाई चिथोर्ने, चिमोट्ने वा दबाउने गरेर पीडा दिने गर्दछन् ।
३. मेसोकिजम (स्वपीडन रति)
त्यस्तै यस्तो समस्या भएकाहरुले स्याडिजम (परपीडन रति) विपरीत आफूलाई आफ्नो यौन पार्टनरलाई शारीरिक पीडा दिन लगाएर मात्रै यौनतृप्ति लिने गर्दछन् ।
यस्ता समस्या भएकाहरुले सार्वजनिक स्थलमा अपरिचित भीडभाडमा आफ्नो लिंग रगडेर यौनतृप्ति लिने गर्दछन् ।
यस्तो समस्या भएकाहरुले यौनक्रीडा गर्न अयोग्य बालबालिकाप्रति आकर्षण भएर उनीहरुलाई ललाई फकाई विभिन्न यौन अगं खेलाएर यौनतृप्ति लिने गर्दछन् ।
६. बेस्टियालिटी (पशुगमन)
यस्तो समस्या भएकाहरुले घरपालुवा जनावरलाईयौन सम्पर्क गरेर यौनतृप्ति लिने गर्दछन् ।
७. नेक्रोफिलिया (मृत शरीरप्रति आकर्षण)
यस्तो समस्या हुनेहरुले मृत शरीरलाई यौन सम्पर्क गरेर यौनतृप्ति लिने गर्दछन् ।
किन बढ्दै छ यौन विचलन ?
मानिसमा हुने असीमित यौन चाहना र हाम्रो समाजको बन्धनयुक्त यौन व्यवहारनै यौन विचलनको मुख्य कारण हो । हाम्रो नेपाली समाजमा यौनलाई अझै लज्जापूर्ण वा खराब कार्यका रूपमा हेरीनुले पनि युवामा यौन विचलन बढ्दै गएको मनोचिकित्सकहरु बताउंछन् । प्रविधिको विकाससँगै यौनसँग सम्बन्धित कुराहरू हेर्ने र पढ्न सहज छ । जसको कारण यौन चाहनान बढु स्वभाविक हो तर यौनका विषयमा खुल्न नचाहने नेपाली समाजले यौनको सहज उपलब्धतालाई स्वीकार गर्दैन । यौनका विषयमा खुलेर छलफल नहुनु, निश्चित सीमा कोरिनु अर्को कारण हो । यस्तो सीमा र यौन आकांक्षाको द्वन्द्वले यौन कुण्ठा बढाने र कुण्ठाले जन्माउने डर, चिन्ता, लाज र हीनताबोधले उसलाई आफ्नै नजरमा गिराने गर्दछ । जसका कारण यौन विचलनले जन्म लिने मनोचिकत्सकहरूको साझा धारणा छ । एजेन्सीको सहयोगमा /फाईल तस्वीर